विश्वकप क्रिकेट-कसले जित्ला उपाधि ?:lumbinireview
विश्वकप क्रिकेट खेल्न विश्वका उत्कृष्ट दस टिम र सो टिमका नामी क्रिकेटरहरू यतिबेला बेलायतमा छन् । विश्वकप क्रिकेटलाई लोकप्रियताको आधारमा विश्वकप फुटबलपछिको दोस्रो ठूलो प्रतियोगिता मानिन्छ । अझ क्रिकेटको अपार क्रेज भएको नेपालमा विश्वकप क्रिकेटको प्रतीक्षा फुटबलको विश्वकपसरह नै हुनथालेको छ ।
विश्वकप क्रिकेटको यो १२ औँ संस्करण हो । सन् १९७५ मा पहिलो पटक विश्वकपको आयोजना भएको थियो । वेस्ट इन्डिजले पहिलो संस्करण मात्र होइन, सन् १९७९ मा दोस्रो विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि पनि जितेथ्यो । सो समय वेस्ट इन्डिज अपराजेय थियो । वेस्ट इन्डिजको धाकलाई चुनौती दिने कुनै देशको टिम थिएन ।
सन् १९९३ मा भएको तेस्रो संस्करणमा पनि वेस्ट इन्डिज प्रमुख उपाधि दाबेदार थियो । वेस्ट इन्डिज सहजै फाइनलमा पुग्यो पनि । तर उसले उपाधि भिडन्तमा तुलनात्मक रूपमा कमजोर आँकिएको भारतलाई हराउन सकेन र उपाधि जितको ह्याट्रिक बनाउनबाट चुक्यो । त्यसपछि वेस्ट इन्डिजले अहिलेसम्म पुनः ट्रफीमा आफ्नो नाम लेखाउन सकेको छैन । यसबीच सन् १९८७, १९९९, २००३, २००७ र २०१५ मा गरी अस्ट्रेलियाले सबभन्दा बढी पाँच पटक विश्वकप जितेको छ । सन् १९९२ मा पाकिस्तान, सन् १९९६ मा श्रीलङ्का र सन् २०११ मा भारत विश्व च्याम्पियन बने ।
विश्वकपको नयाँ संस्करण इङ्गल्यान्डमा सुरु भएको दुई दिन बितिसक्यो । यसपटक कसले उपाधि जित्ला त ? अनुमान गर्न कठिन छ । किनभने विश्वकपमा सहभागी दसै राष्ट्र एकले अर्कालाई हराउन सक्षम छन् । यसैलै विश्वकप उपाधि विजेताको ठोकुवा गर्न गलत नै सावित हुन्छ । यद्यपि हामी विश्वकपमा खेल्ने टिमहरूको सम्भावनाका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ ।
घरेलु टिम इङ्गल्यान्डलाई प्रमुख दाबेदारको रूपमा लिइएको छ । क्रिकेटको जननी राष्ट्र हो इङ्गल्यान्ड तर इङ्गल्यान्ड एकदिवसीय विश्वकप च्याम्पियन बन्न सकेको छैन । तीन पटक फाइनलमा पुगेर पनि च्याम्पियन बन्न नसकेको इङ्गल्यान्डलाई यसपटक प्रमुख दाबेदार मानिएको छ । यसका केही कारण छन् । आइसीसी वरीयतामा शीर्ष स्थानमा छ इङ्गल्यान्ड । सन् २०१७ मा च्याम्पियन्स ट्रफीको सेमिफाइनल हारेपछि इङ्गल्यान्डले एकदिवसीय शृङ्खला हारेको छैन । यसबीच उसले अस्ट्रेलिया (दुई पटक), न्युजिल्यान्ड, भारत र श्रीलङ्कालाई एकदिवसीय शृङ्खलामा हराएको थियो ।
यस वर्ष वेस्ट इन्डिजविरुद्धको शृङ्खला २–२ ले बराबरीमा सकिनु इङ्गल्यान्डका लागि कमजोर नतिजा भएको छ । विश्वकपमा खेल्ने टिममा इङ्गल्यान्ड मात्र यस्तो टिम हो जसमा चार ब्याट्सम्यान (जोय रुट जस बट्लर, जोनी बेरिस्टा र इयोन मोर्गन) आइसीसी वरीयताका शीर्ष २० मा छन् ।
यसैगरी घरेलु मैदान र दर्शक इङ्गल्यान्डका लागि सबभन्दा ठूलो प्लस प्वाइन्ट हुनेछ । स्वीङ र बल मुभ हुने पिच र ओभरकास्ट कन्डिसन इङ्गल्यान्डको क्रिकेटका विशेषता हुन् । जुन परिस्थितिमा खेल्न इङ्गल्यान्ड अभ्यस्त छ ।
सन् २०१५ मा विश्वकपको समूह चरणबाट बाहिरिएपछि अपमानित महसुस गरेको इङ्गल्यान्डले त्यसपछि सम्पूर्ण ध्यान एकदिवसीय र टि २० जस्ता छोटो संरचनाको क्रिकेटमा लगाएको थियो । प्रशिक्षक ट्रेभर बेलिस र कप्तान इयोग मोर्गनले टिममा आक्रामक, सकारात्मक, जोखिम लिने मनस्थितिको खेल भरिदिए । त्यसपछि इङ्गल्यान्डको टिममा चमत्कार भयो । विश्वकपपछि एकदिवसीय क्रिकेटमा खडा भएका १७ मध्ये १५ सर्वाधिक स्कोर इङ्गल्यान्डकै नाममा छ । यसबीच सन् २०१८ मा अस्ट्रेलियाविरुद्ध ४८१ र पाकिस्तानविरुद्ध ४४४ रन बनाएर इङ्गल्यान्डले दुई सर्वाधिक स्कोरको कीर्तिमान पनि राखेको छ ।
दोस्रो पालिमा सर्वाधिक ११ मध्ये पाँच स्कोर इङ्गल्यान्डको नाममा छ । घरेलु मैदानमा भएको एकदिवसीय क्रिकेटमा लक्ष्य पछ्याएर इङ्गल्यान्डले पछिल्ला १८ खेल जितेको छ । गत फेब्रुअरीमा वेस्ट इन्डिजविरुद्धको खेलमा इङ्गल्यान्डले २४ छक्का प्रहार गरेर विश्वकीर्तिमान बनाएको थियो ।
ब्याटिङ इङ्गल्यान्डको सबभन्दा खतरनाक पक्ष हो । मोइन अलीजस्ता विश्वस्तरीय ब्याट्सम्यान आठौँ क्रममा हुनुले पनि इङ्गल्यान्डको ब्याटिङ क्रम कति बलियो छ भन्ने थाहा हुन्छ । जोनी बेरिस्टो र इयोन मोर्गन शानदार लयमा छन् । जस बट्लर विश्व क्रिकेटकै सबभन्दा विस्फोटक ब्याट्सम्यान हुन् । इङ्गल्यान्डको बलिङ पनि सन्तुलित छ । आदिल रसिद भरोसा गर्न लायक स्पीनर हुन् भने बेन स्टोक्स र क्रिस वोक्सजस्ता अलराउन्डरले इङ्गल्यान्डको टिममा थप सशक्तता प्रदान गर्दछ । नयाँ तेज बलर जोफ्रा आर्चरले इङ्गल्यान्डको टिममा एक्स फ्याक्टर ल्याउने विश्वास गरिएको छ । इङ्गल्यान्डपछि भारतलाई दाबेदारको रूपमा लिइएको छ । सन् १९८३ मा कपिलदेवको नेतृत्वमा विश्वकप क्रिकेटको उपाधि जितेपछि भारतमा यस खेललाई लिएर देखिएको पागलपन अहिलेसम्म कम भएको छैन । अहिले भारत क्रिकेटको सुपर पावर भइसकेको छ । यसपालि पनि सबभन्दा बढी बाजी भारतमाथि नै लाग्नेछ । कप्तान विराट कोहलीको रूपमा भारतीय टिममा विश्वका उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान छन् । रोहित शर्मा र शिखर धवन विश्वकै उत्कृष्ट प्रारम्भिक जोडी हो । कोहली, रोहित र शिखरबाहेक पूर्व कप्तान महेन्द्रसिंह धोनीले पनि यस विश्वकपलाई विशेष बनाउन प्रयास गर्नेछ । भनिन्छ, विश्व क्रिकेटमा धोनीजस्तो फिनिसर छैन । अझ अलराउन्डर हार्दिक पाण्ड्यामा पनि सबैको नजर हुनेछ ।
यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रजित शाक्यले लेखेकाछन् ।